Noma yimuphi imoto kumele njalo asebenze kahle futhi stably. Ukuze uqinisekise lokhu, umshayeli kumele baqonde ukuthi kwenzekani nomngani wakhe yensimbi kanye bakwazi ukuqeda okungenani umonakalo omncane. Futhi uma yakho Vaz-2107 eyeka endleleni ngaphandle kwesizathu, noma ngisho ukuqala, kungalimaza imbangela itholakala carburetor. Kunezindlela ezintathu kulesi simo - wokuhlanza, carburetor silungisa Vaz-2107 noma esikhundleni yayo egcwele. Kodwa noma kunjalo, kufanele wazi ngalokho izinyathelo kudingeka zenzeke ukuze ahlukanisa ke. Empeleni, konke akuyona njengoba kunzima njengoba kubonakala efika kuqala, bese ushintsha, futhi ngokunokwenzeka carburetor Tuning Vaz-2107 ongawaphatha.
Nale inhlekelele wabhekana hhayi kuphela abanikazi "ngasikhombisa". Bonke labo babe imoto egijima kwi umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli unenkinga ihlanzeke futhi. Kodwa kungani okwenzekayo? Futhi into wukuthi nge injini uphethiloli uthole nezinye izinhlayiya ezincane ezihlukahlukene nokungcola, okungadingi ukwandisa ngempela izinsiza lonke uhlelo amafutha kanye injini iyonke. Ngakho-ke ukwenza yesondlo gqwa kohlelo fuel, okungukuthi ukuhlanza carburetor (2107-I imodeli - iyathinteka), kubalulekile okungenani kanye ngonyaka.
Indlela ukususa futhi alungise lo esikhululekile okuyingxenye? Step by step imiyalelo
Ngakho, ngaphambi kokuba uqale ukuliqaqa, kudingeka unqume ukuthi ngempela lapho carburetor 2107. Lokhu esikhululekile okuyingxenye igibele ngaphansi lemifanekiso emoyeni futhi has ngezikulufo ezine ukuthi kumele unscrewed. Kungcono ukukwenza usebenzisa Allen ukusonta. Ngokulandelayo, Ukunqamula ukuxhuma ikhebula le mpintsha nophethiloli hose. Lapho carburetor imodeli 2107th isivele ine cishe akukho indlela yokuxhuma, susa amabhawudo emihlanu phezulu, kangangokuthi angabangela bazobhujiswa. Khona-ke, susa kusukela jet carburetor amafutha kanye valve Solenoid.
Manje thatha ukufakwa kokumqoka kuphela amancane ahlukanisa indlela. Sicela khipha eksisi iflothi, bese zonke yamabhola antantayo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi le nqubo kutlhoga ukunemba konke okusemandleni, kungenjalo yonke imininingwane ukuthi ngeke kukhishwe, sikhubazekile futhi ayisekho zisebenziseke.
Carburetor imodeli 2107th, njengazo zonke abanye, has a ikhava, okuyinto okwamanje kufanele kususwe. Hlola ukufakwa. Uma yena has a lot of umonakalo, ukushintsha ngcono. Ngaphezu kwalokho uyasikrufulula imishudo ezine ukuthi uvikelekile idivayisi ikhava yokuqala kanye ahlukanisa ipulaki fuel zokuhlunga. Zonke manje carburetor 2107th imodeli Vaz zingase zihlanzwe ngokuphepha.
Indlela yokwenza yokuhlanza akho?
Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthenga emakethe noma esitolo auto uketshezi ekhethekile, okuthiwa: ". Ukuze ukuhlanza carburetor" Ngaphezu kwalokho, lokhu bonke liquid batheleka esitsheni (kungaba epanini encane), yeka wethu imodeli carburetor 2107th futhi ... cha, musa ubilise, futhi ushiye amahora 24 at Igumbi lokushisa. Usuku athathe isisu ingxenye (ketshezi wokuhlanza, okuyinto thina batheleka esitsheni, kufanele kube nombala omnyama) kanye impregnate ngayo uphethiloli. Ungasebenzisa ucezu ajwayelekile iphepha noma amakhadibhodi. Khona-ke Sula konke ngendwangu futhi uqhubekele inhlangano. Nanguya ngokulandelana reverse ukulandelana disassembly.
HP OfficeJet 4500: MFP enemisebenzi for kwavulwa ihhovisi elincane noma iqoqo elincane
Imithi elwa namagciwane uma ukhulelwe: 1, 2, 3 senyanga
Oceanarium (Kazan): ngezibuyekezo nezithombe